China Ginger Organic Ginger and Factory | Nongchuanggang
Fanoritsoritana ny vokatra ginger voajanahary: misy gingerol efatra na dimy heny noho ny fampitahana ny sakamalao voajanahary amin'ny sakamalao mahazatra, ary na dia malefaka aza izy io, dia matsiro be. Fanampin'izany, ny ginger organika dia ambany fibre, noho izany dia matsiro sy mamelombelona kokoa izy noho ny sakamalao mahazatra.
Ny fihinanana sakamalao ao anaty andro mafana dia afaka vatan'olombelona mba hanana fientanam-po tsara kokoa, hatsembohana, hampangatsiaka ary hamelombelona. Ho an'ny fahombiazan'ny hafanana amin'ny ankapobeny, toy ny fanina, palpitations, tery amin'ny tratra, maloiloy ary toe-javatra hafa ananan'ny marary, dia fanampiana lehibe tokoa ny misotro lasopy / rano sakamalao. Rendan, fanafody sinoa nentim-paharazana hisorohana ny fanafanana hafanana, dia misy sakamalao, izay ampiasaina hanamafisana ny vavony, hamelombelona sy hamelombelona ny ati-doha.
Hitan'ny fikarohana siantifika fa ny ginger organika dia mety mihetsika toy ny antibiotika sasany, indrindra amin'ny salmonella. Rehefa mijaly amin'ny hafanana mafana, ny sakafo dia mora voan'ny bakteria, ary ny fitomboana sy ny fiterahana haingana, mora miteraka gastroenteritis maranitra, ny fihinanana sakamalao dia afaka manampy amin'ny fisorohana sy ny fifehezana.
Ny fihinanana sakam-bary voajanahary dia misy fiantraikany amin'ny fisorohana ny fisaleboleboana sy ny fampitsaharana ny fandoavana. Raha misy ny "tsy fahampian'ny fihetsiketsehana" ateraky ny fanatanjahan-tena sasany dia mety hanamaivana izany ny fihinanana sakamalao. Ny fanadihadiana dia nanaporofo fa ny vovoka sakamalao amin'ny hetsika ateraky ny aretin'andoha, fanina, maloiloy, mandoa ary fambara hafa amin'ny taha mahomby 90%, ary ny fahombiazan'ny ora 4 mahery. Ny fampiasana olona mihinana sakamalao mba hisorohana ny fitohanan'ny fiarakodia, ny hazan-dranomasina, na ny acupoint Neiguan stick, dia misy vokany miharihary, noho izany dia manana ny lazany "mandoa fanafody ao an-trano" izy.
Isan-karazany Ginger tanora
Lanja (kilao) 80g 100g 150g 200g 250g
Laharana maodely 100g-300g
Anaran'ny vokatra Fivarotana ginger organika vaoavao be any Sina
Size 100g / 150g / 200g / 250g / 300g
vokatra Fiompiana vaovao
Fonosana Carton plastika
Fonosana 20kg / kitapo, 10kg / ctn
Antsipirian'ny fonosana 100g sy ambony 10kg / kitapo, 20kg / kitapo, 10kg / ctn
150g sy ambony 10kg / kitapo, 20kg / kitapo, 10kg / ctn
200g ary miakatra 10kg / ctn, boaty 10kg / gaisu, boaty 30lbs / plastika
250g ary miakatra 10kg / ctn, boaty 10kg / gaisu, boaty 30lbs / plastika
Teo aloha: Vovoka sakamalao
Manaraka: Tongolo lay mainty